Dad ku dhintay rabshado ka dhacay garoon kubadeed oo ku yaal Senegal. – Cayaaraha dunida
Dad ku dhintay rabshado ka dhacay garoon kubadeed oo ku yaal Senegal.
Wararka ka imanaya dalka Senegal ayaa sheegaya in sideed qof ku dhinteen sagaal iyo afartan kalena ku dhaawacmeen dagaal dhex maray taageerayaal kooxaha kubadda cagta ah oo ciyaari ku wada ciyaarayey caasimadda dalkaas ee Dakar.
Wakaaladda wararka dalkaa ee (APS) ayaa sheegtay in taageerayaasha labada kooxood ay isku dhaceen kaddib markii ay dhammaatay cayaar ka scotay garoonka Demba Diop.
Booliiska ayaa dadkaas ku kala dareeriyey qiiqa dadka ka ilmeysiiya, kaddibna gidaar ayaa soo dumay dad badan oo doonayey in ay ka baxaan garoonka.
Dad badan ayaa ku dhaawacmay mashaqadaa. Dhacdadadan ayaa dhacday iyadoo uu socdo wareegii ugu dambeeyey tartanka koobka heerka koobaad ee dalka Senegal, waxanay ciyaarta kama dambaysta ahi dhex maraysay labada kooxood ee la kala yidhaa Stade de Mbour iyo Union Sportive Ouakam.
Iyadoo ay labada kooxood kala marayaan 1-1 sagaashankii daqiiqo ee ciyaartu ku dhamaatay ayaa kooxda Stade de Mbour dhalisay gool wakhtigii dheeraadka ahaa ee lagu daray ciyaarta waxaanay ku badisay 2-1, waxaana isla markiiba bilaabmay rabashaddaa dadka galaafatay.